MARKA: Tobannaan lagu soo qabqabtay hawlgal ay maanta ciidamadu sameeyeen - Halbeeg News
MARKA (HALBEEG) – Tobannaan qof oo dhallinyaro u badan ayaa lagu soo qabqabtay hawlgal ciidamada ammaanku maanta ka sameeyeen qaybo kamid ah degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
Hawlgalkan ayaa yimid kaddib weerar gaadmo ahaa oo dagaalyahanno Al shabaab ka tirsani xalay fiidkii kusoo qaadeen saldhigyada ciidmaada dowladda ee degmada Marka.
Xaafadaha saaka ciidamadu baaritaanka ka sameeyeen dadka badanna laga soo xirxiray waxaa kamid ah Abasiiyo, Kawaanka Malaayga iyo Ruusiya. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in dadka lasoo xirxiray oo tiradoodu 50 qof kor u dhaafaysao xilligan lagu hayo saldhigga dhexe ee degmada.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in dadkan baaris lagu samayn doono, ciddii wax dambi ah lagu waayana dib xorriyaddooda loo siin doona, kuwa ay ku caddaato inay dambiileyaal yihiinse sida ugu dhaqsaha badan sharciga loo soo taagi doono.
Waa markii labaad muddo labo asbuuc gudahood ah ee dagaalyahanno Al shabaab ka tirsani ay weerar caynkan oo kale ah kusoo qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda ee magaalada Marka.
Bil kahor ayey ahayd markii ciidamada dowladda oo kaashanaya mileeshiyaad deegaanka ahi ku guuleysteen in ay Al shabaab ka saaraan qaybo ay kaga sugnaayeen magaalada Marka iyo waliba deegaanno kale oo dhowr ah oo isla degmadaas hoos taga.